Ku xigta si loo sameeyo darsinkii roodhida ayaa, la yaab leh, Blog Suuq-geynta Ukunta!
Waan jeclahay dareenka 'wargeys' nadiif ah ee ku jira balooggaaga! Qaab -dhismeedku waa mid aad u nadiif ah oo qol leh - aad ayaa loo qabtay! Waxaan u malaynayaa inay jirto fursad baarkaaga nav si aad ugu qorto Subscribe to RSS ama xiriiriyaha emaylka. Waxaa laga yaabaa in loo-caddeeyo Gurigaaga iyo Xiriirrada Ku saabsan… ka dibna si sax ah loo caddeeyo foomka rukunka iyo sumadda RSS. Haddii aysan ku jirin baarka nav, marka loo eego midigta ka hooseysa dhinaca midigta
Waxaan kugula talinayaa astaanta RSS inta badan bogagga ku jira dhinaca sare iyo midig ee bogga 'ka sarreeya laabta'… In kasta oo daalacashada badankood ay hadda si weyn ugu jiraan awooda RSS - astaanta RSS waa wicitaan khiyaano leh oo ficil loogu talagalay dadka inay is -qoraan!
Sans serif farta ma aha mid saaxiibtinimo leh sida xarfaha serif -ka ee akhriska - laakiin marar dhif ah ayaad u heshaa xarfaha serif si joogto ah akhrinta maqaallada shabakadda. Ma hubo sababta laakiin sidoo kale ma isticmaalo. Si aan u magdhabo, in kastoo, waxaan hubiyaa in cabirka font -kayga la akhrin karo. In muddo ah, waxaan aragnay cabbirka farta oo ku sii yaraanaya shabakadda markii kormeerayaashu weynaadeen.
Hadda kormeerayaashu aad bay u weyn yihiin oo leh qaraaro aad u sarreeya - samaynta xuruufta yaryar oo aad u adag in la akhriyo! Waxaan soo galnay goob buuxda. Waxaan ku talin lahaa in la kordhiyo cabbirka font-ka waxa aad ka kooban tahay oo ah laba-laab. Waxaad tan u samayn kartaa uun sanduuqaaga dhexe adoo ku daraya cabbirka font-ka: 13px ilaa #contentmiddle ee xaashida qaab-dhismeedkaaga.
Markaan samaynayo talooyinkan, mar walba waxaan isku arkaa inaan jebiyo xeerarkeyga! Si kastaba ha noqotee, waxaan ku talin lahaa adeegsiga cinwaannada (h2 iyo/ama h3) oo ku jira waxyaabahaaga iyo sidoo kale liisaska qaarkood. Si daacadnimo ah, dadku runtii ma 'akhriyaan' baloogyada iyo websaydhada inta ay ka leexiyaan. Waxay u baahan tahay inaan faqash waxyaabahayaga. Ka fikir baloog kasta sidii qalfoof. Ku dar cinwaan madaxa, jirka, lugaha iyo cagaha. Ka dib ku dar xoogaa dhibco xabadka feerahaaga. Markaad dib u eegis ku sameyso shaqadaada, hubi markaad xoqdo maqaalka, waad fahmi kartaa waxa guud ahaan boostadu isku dayeyso inay dhahdo iyadoo aan si dhab ah loo akhrin erey kasta.
sifeeyey. Sawirku wuxuu u qalmaa kun akhriste! Waan ballan qaaday. Waxaad heli doontaa wax aad u yar oo ka mid ah qoraaladayda oo aan lahayn sawir waxaanan ogaaday koror deg-deg ah oo joogto ah oo gujin-dhex-dhexaad ah oo ku socda qoraalladayda quudintayda.
Miyaad ka fikirtay sumadaynta boggaaga blog-kaaga ama si kale? Uma maleynayo inay wax badan qaadan doonto in astaantaada loo wareejiyo balooggaaga ama xitaa si aad uga faa'iideysato balooggaaga oo ah udub-dhexaadka bartaada internetka. Isbeddelka maalmahan ayaa isku biiraya labada… baloogyada waxay u eg yihiin goobo badan oo goobihiina waxay aad u adeegsadaan farsamooyinka qorista. Waxaan lahaa degel deg deg ah muddo dheer, oo la yiraahdo Coders4Hire. Waxaan helay kadib markii waxoogaa yar oo qoraal ah inaan ganacsigeyga si xawli ah ugu kobcayo barteyda marka loo fiiriyo boggeyga! Waxaa laga yaabaa inaad isla hesho.
Uguyaraan, hubi inaad kudirto xiriiriye buuggaaga dhinaceeda dhinaceeda ah! Buuggaaga, 101 Talooyin Ganacsi, waxay kalsooni badan u keeni doontaa codka balooggaaga intaad sii waddo dhisidda awoodda! Sidoo kale, waxay kor u qaadi doontaa iibintaada maadaama mareegahaagu ku korayo kalsoonida.
Waxay kaloo qaadan doontaa qaar ka mid ah meelaha cad ee tiirkaas. Anigu kuguma dhejinayo - waxaan u malaynayaa inaad weli ka shaqaynayso dulucda!
Waxaan ku arkay nuqullo sumad -nuqul ah cinwaannadaada - laakiin ereyada furaha ahi waa bannaan yihiin. Waxaan ku talin doonaa dhowr plug tag tag in aan ku qoray qoraal hore.
Taasi waa inay kugu mashquulisaa xoogaa! La socodsii sida bartaadu u socoto ka dib markii la hirgeliyo qaar ka mid ah isbeddeladan. Dulqaad yeelo! Ku guuleysiga balooggu wuxuu ku saabsan yahay Mawduuc, Xamaasad iyo Hawlgal!. Fadlan sidoo kale ha noqon shisheeye - waxaan jeclaan lahayn inaan dib u maqalno sida ay u socoto!